WARBIXIN: Cabdiweli Gaas & Cali Xaaji oo ku loolamaya G. Mudug iyo Arrimaha xiisaha u yeelaya Dagaal siyaasadeedkan. – Puntlandtimes
October 14, 2018 W LAASCAANO
GAALKACYO(P-TIMES)- Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in ay todobaadkan iyo kan soo socda bilowgiisa ay Gaalkacyo tagi doonaan Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Musharax Madaxweyne Cali Xaaji Warsame, oo horey ugu tartamay doorashadii 2014-kii, mar kalena waqtigan u orday xilkan.
Xogta soo gaartay Puntlandtimes.com waxay daaha ka rogaysaa in Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas uu doonayo in uu kasoo horeeyo soo dhaweynta Cali Xaaji Warsame, halka dhinaca kalena ay si dhaw isula ciyaarayaan.
Labadan siyaasi oo ka soo wada jeeda gobalka Mudug, gaar ahaana Beesha Cumar Maxamuud ayaa ciyaaraya ciyaar adag oo siyaasadeed, waxayna ku loolamayaan kuraasta gobalka Mudug ee xildhibaanada cida kusoo baxaysa ee beelahooda.
Shan kursi ayay isku hayaan sidii uu ninba ninka kale saameyntiisu ugu xoog badan lahayd, waxaana Cali Xaaji Warsame uu dadaal dheer galinayaa in ay soo baxaan dhalinyarro firfircoon oo siyaasadda doonaysa in ay saameyn ku yeelato, kuwaas oo hadda inta badan taageero ka haysta Odayaashooda beelaha.
Cabdiweli Gaas ayaa xooga saaraya sidii ay saaxiibadiisa Madaxtooyadu u heli lahayeen kuraasta baarlamaanka, waxaana hadda loolanka gobalka Mudug ee kursi raadinta beelahooda ku jira in ka badan 7 xubnood oo ay ku jiraan gacan-yaraashiisa iyo masuuliyiin xilal ka haya golaha fulinta ama Hay’addaha dawladda.
Xubnaha Madaxtooyadu u sharaxday xildhibaan raadinta qaarkood ayaa ah dadka aadka ugu dhawaa shanti sanno ee lasoo dhaafay Madaxweynaha Puntland, kasokow xaquuqda Dastuuriga ah ee ay u leeyihiin matalaada beelahooda, haddana caqabado badan ayay wajahayaan oo ku jiheysan bulshada oo u diyaarsan isbedel taabagal ah waqtigan.
Adeegyada Caafimaadka, Ammaanka iyo Jidkii isku xiyarayey Garoowe iyo Gaalkacyo oo fashil soo wajahay ayaa kamid ah dhaliilaha ugu xooga badan ee uu waqtigan gobalkiisa ka wajahayo Madaxweyne Gaas.
Dhalinyarro careysan oo kamid ah kuwa Hormuudka u ah gobalka ayaa dhawaan sadex maalmood waday banaanbaxyo ay uga cabanayaan dhalinyarro la dilay, waxaana maamulka gobalka Mudug iyo kan degmada Gaalkacyo ay ugu hanjabeen xarig, taas oo ka dhigneyd ficilo baal-marsan sharciga iyo Dastuurka Puntland.
Maamulka gobalka iyo Degmadu waxay ku eedeeyeen dhalinyaradda in siyaasad ku dhex jirto, taas oo la rumeysan yahay in ay qeyb ka tahay is haysi labada dhinac, ka dib markii dhalinyaradda qaarkood lagu xagliyey dhinaca Musharax Cali Xaaji Warsame.
Dagaalka Siyaasadeed ee labada siyaasi oo horey u soo bilowday sannadkii 2015-kii, ayaa la rumeysan yahay in uu yahay xiiso leh waqtigan, waxaana uu ku soo beegmay xili gobalka Mudug uu yahay mid ka aradan waxqabadka Xukuumadda uu hogaamiyo Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Cali Xaaji Warsame wuxuu wasiirka Waxbarashada ka noqday Xukuumadii ugu horeysay ee Cabdiweli Gaas magacaabay 24-kii January 2014, isagoo markaas noqday Ergaygii hogaaminayey wada hadaladii Dawladda Faderaalka lala galayey, waxaana 14-kii Feb 2014 uu ka dhoofay Gaalkacyo, isagoo ku sii jeeday Muqdisho, waxaana la sheegay in uu diray Madaxweynihiisii xiligaas.
Dadka sidda dhaw ula socda is qabadka labadan siyaasi ayaa sheegay in ay isku arkaan kuwa aan wada shaqeyn Karin, gaar ahaana Madaxweynaha Puntland ayaa u arkay Cali Xaaji nin khatar ku ah hoggaamintiisa.
Falanqeeyaasha siyaasadda ayaa rumeysan in Cali Xaaji Warsame ka fursado badan yahay waqtigan Madaxweynaha xilka haya, oo uu horey u sheegay in uu sabab u ahaa doorashadiisii, marka laga eego taageerada ay u hayaan bulshada iyo dhalinyaradda gobalka, oo imika u diyaarsan in ay u dirsadaan baarlamaanka Puntland cid si guud u matali karta.
Doorashada Puntland ee sannadka 2019-ka ayaa ka xiiso iyo xamaasad badan tii dhacday 2014-kii, xiligaas oo labada siyaasi ee kala ah Cabdiweli Gaas & Cali Xaaji ay aad ugu kacsanaayeen Madaxweynihii waqtigaas Cabdiraxmaan Faroole, waxaana muuqata in markale ay hadda fooda is darayaan siyaasiintii shalay isku aragtida ka ahaa arrimaha qaarkood, gaar ahaana in aan Faroole soo laaban.
KALA SOCO WARSIDAHA PUNTLANDTIMES.COM XOGAHA DOORASHADA
Cumar maxamuud labo kursi oo qura ayey ku leeyihiin gobolka mudug. Umajeedo wax isbal ah oo ay doorasha puntland ku yeelan karaan. Ali xaaji kama duwana mukhtar roobow. Taariikhduna wax ma cafiso waana lama ilaawaan.